Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry: Fiomanana hisedra ny tsy nampoizina | NewsMada
Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry: Fiomanana hisedra ny tsy nampoizina
Tsy miseho tarehy, vatana aza tsy ananany, tsy hita samborina araka izany ity otrikaretina ity, toy ny ankabeazan’ny otrikaretina. Mifono misitery tsy mbola voavahan’ny mpikaroka siantifika ny mombamomba azy. Azo heverina ho tsy misy saina nefa feno afetsena ny fahaizany mihanaka eran’izao tontolo izao, na tsy lany hevitra no tsy very fanahy aza Raolombelona manoloana ny loza aterany dia efa hita taratra ihany fa mihiratra tsikelikely ny fahaizany amin’ny fametrahana tetika anoherana ny setrasetra ataon’ity valanaretina maneran-tany. Mazava ankehitriny fa ny fihibohana sy ireo hetsika sakanan’ny fiparitahany no fototra fiarovan-tena sy fiarovana ny fiarahamonina, ilay nanery ny fihibohana no voahiboka tapi-dàlana aleha.
Hatrany am-piandohana tsy ampoizina hatrany ny làlana omban’ilay otrikaretina, hany fantatra dia mi­soko mangina manara-dia an’izay olona mihoa-pefy an’ireo fepetra ny zotra ahafahany mihanaka etsy sy eroa. Ny fifehezana tsy ihetsika tsy anefa ny asa famokarana sy tsy anao ny fikaratahana samihafa entina ameloman-tena dia mampitombo fahasahiranana, ny orinasa lasa mareforefo am-pitoerana, ny mponina lany vatsy, ny madinika ramaka tsy manan-katelina. Tsy misy sehatra tsy mitondra takaitra, fantatra fa tolona tsy omby tratra aza no miandry eo amin’ny fanarenana rehefa voadingana ity loza ity, ny famonjena an’
ireo mizaka ny voina izao dia izao no mahamehana. Rariny raha mikaikaika avokoa izay latsaka lalina ao anatin’ny fahorim-pahasahiranana, raha bitsibitsika no atao fanehona antso famonjena tsy antenaina hisy aheno. Eo ankilan’izany anefa mety tsy ho fantatra in­tsony aiza no vonjena, ankavia sy ankavanana, atsimo sy avaratra, atsinanana sy andrefana samy tomefin’ny antso maro samy mitaraina fa maizina avokoa ary mihatra aman’aina daholo. Tsy lafatra ny fomba fanatanterahana ny famonjena, ny feo an’ireo niangaran’ny vintana ka tsy nahazo ny anjara tokony ho azy manakoako mafy eo anivon’ny fahanginan’ireo efa nisitraka ny fanampina niantefa any aminy. Iza no maro ary iza no vitsy, ireo efa nahazo tosika fanamavainana ny fahasahiranany sa ireto olona mikaikaika nohon’ny fanadinoin’ny fanampina azy ireo ? Mazava ho azy fa mila fandaminana tsy mitsahatra ny lamina mba tsy isehon’
ny fiangarana sy ny tsy rariny. Tsy ny noana akory no ampina trotraka ka ho tampenam-bava indray, efa tsy misoka-bava andrapaka ve no mbola ikatom-bava tsy afaka hivolana ! Nefa kosa raha itsinjovana ny fitonina, tsara angamba raha mifehy tena ikatom-bava ireo mpampandotso mampitombo korontana eo amin’ny lamina izay efa tsy mahenaka ny fanomezana fafaham-po ny ampahan’ny olona mendrika vonjy.